कैलाशको कुटी: Just havealook 'The Wonder'
Posted by कैलाश at 12:15 PM
यो कुरा मैले हजम गर्न सकिँन ! यो कुरो हुनै सक्तैन, तपाईलाई जसले यो ईमेल पठायो, त्यसले तपाईलाई भुल्याउनेमात्र काम गर्यो है !
ती फोटोका फलहरु हेर्नुस् त - केही बेग्लै लाग्दैन र ! अनि धेरै वनावटि जस्तो लाग्दैन र !
कुनै को हात सिधा छ, कसैको हात अगाडि आ'को छ । त्यस्तै कसैको सिधा खुट्टा छ भने केही को खुट्टा कैँची बनाइएको छ । "गुगल" मा पनि खासै चित्तबुझ्दो कुरो भेटिएन यो रुख को बारे मा !
Interesting but hard to believe!
रमाईलो मान्नको लागी पनि रमाईलो मान्न सकिएन । कुनै यौटा रुखमा नारी आकारमा यौटा फल फल्यो रे सम्म भन्दा हुन्थ्यो तर फल सबै नारी आकारमा फल्छ भन्नु त फटाहा कुरो हैन र ? कस्ले झुक्यायो तपाईंलाई कि हामीलाई झुक्याउन खोज्नुभएको हो ?
मैले सुनेको यो रुख नेपालमा पनि छ रे। यो रुखमा बर्षमा एकदिन मात्रै यस्तो फल लाग्च क्या!
बिदेशमा अप्रील महिनाको पहिलो तारीखमा र नेपालमा भने जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट । बुझ्नु भएन?
यो पोस्टको लागि मनमा जे लाग्यो त्यो मजाले भनिदिनु भो। बढिया यार। यो पोस्ट पढेर मलाइ खुब गालि गर्लान् नि भनेर म त आगाडि नै तयार भएरै हालिदेको। किनकि कोहि कोहिले नाम नखुलाइकन मेरो पहिला पहिलाका पोस्टहरुमा अनेक लेख्न भ्याउथे। सुनेको कुरा, जुन कुरालाइ बढि वर्जित गरिन्छ त्यहि कुरा सधै आगडि आउछ रे। गालि गर्ने माध्यम पनि किन नदिने? हेरौ अब के हुन्छ भन्ने सोच आयो मनमा।
हुनत मलाइ पनि खास कुरो के हो भन्ने थाहा छैन। आकारले भनेझै गूगल्मा खोज्दा मैले पनि खासै बिश्वासनिय कुरो भेटेको थिइन। खालि केहि ब्लगरको ब्लगमा र केहि वेबसाइटहरुमा यहि फोटो र यहिबारेमा टाल्टुले कुराहरु लेखिएका छन्। आनि कमेन्टपनि यस्तै यस्तै खालका छन्।
ठ्याक्कै यहिबेला ब्लग अपडेट गर्ने मेरो कम्पुटरले धोका दियो। चार दिनपछि मात्रै बिमारि निको हुने भन्ने भएपाछि रोमनमा टाइप गारेको धेरै समय लाग्यो नि।
ए एउटा कुरो नि साथिहरुले मेरो पोस्टलाइ पढेर मलाइ सम्झाउनु भाकोमा धन्यवाद। अरु प्रतिकृया कस्तो हुनेहो कुन्नि? Let's see.
हाउ दिदी हाउ के के पो देखिन पर्छ यो आँखाले । अब म त कति कुरा मान्ने कति कुरा नमान्ने भो नित।अब कुरो कति लाई फिल्टर गरेर लिनु पर्ने हो भन्ने मा अड्क्यो नि त के भन्नु हुन्छ एस्मा?
दिलिप दाइ को कुरा चाँहि मन पर्यो है मलाई, विदेश मा अप्रिल फस्ट को दिन यो रुख मा यस्तो फल फल्छ होला !
साथीहरुको टिप्पणी हेर्दा एउटा कुरा पक्का भो: गलत 'टेम'मा परेछ, पोष्ट ।